युगसम्बाद साप्ताहिक - अन्तरर्वाता
Friday, 04.10.2020, 07:08am (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 07.14.2016, 08:15am
- पोषण केसी, अध्यक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणा आयोग
Tuesday, 06.21.2016, 11:39am
मानिसले तोडफोड गर्ने र सिध्याउने काम मात्र गर्यो - विक्रम पाँडेकाजी
Tuesday, 05.17.2016, 11:12am
मनुष्य जातिले जहाँ पनि तोडफोड गर्ने र सिध्याउने बाहेक अरू केही पनि गरेन । विभिन्न धर्महरूको पालना विश्वभर हुने गरेको छ । कुनै पनि धर्मले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुहुँदैन भनेको छैन । अहिले आधुनिकताको नाममा पानी जम्मा भएको ठाउँमा माटोले पूरिदिने र सपिङ कम्पेक्स बनाउने गरिएको छ ।
Tuesday, 04.12.2016, 01:24pm
आजको आधुनिक युगमा सबैभन्दा परिस्कृत र उत्कृष्ट धर्मको रुपमा मैले बुद्ध धर्मलाई हेर्ने गर्दछु । यो धर्म मानवको जीवनसँग गासिएकोले मानवतावादी दर्शनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु । जुन अन्यमा छैन । भोलिका दिनमा कसरी अगाडि जान्छ त्यो अर्को पाटो हो । म यो राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने हो । यहीबाट उत्पति भएको बुद्ध धर्मको दर्शन, ज्ञान नेपाली भूमिको प्रवद्र्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यही कर्तव्यको निर्वाह मैले मन्त्रालयमार्फत गरेको छु ।
नेपाललाई चीनले समुद्रसम्म जान दिनैपर्छ : रविन्द्र अधिकारी सभापति विकास समिति
Tuesday, 03.29.2016, 03:52pm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सामेल एमाले सांसद तथा संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पावरहन सम्झौताले खुसी हुनुहुन्छ । भारतको नाकाबन्दीपछि उत्तरी नाका खोल्न विशेष पहल र सक्रियता देखाउनुभएका अधिकारीसंग सोही भ्रमणका विषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ–
Tuesday, 03.15.2016, 02:10pm
Thursday, 02.18.2016, 07:38am
नेपालले कहिले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने, कहिले भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने, यो मानसिकता वा फोबियाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । दुवै देशसँगको सम्बन्धको आआफ्नै किसिमको चरित्र र डायनामिक छ । र, हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई हामीले अलग ढंगबाट हेर्नुपर्छ । यसरी एउटा देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्दा अर्काे देशसँगको सम्बन्धको मूल्यलाई कायम राख्नैपर्छ ।
Tuesday, 01.05.2016, 11:29am
सरकार मधेश आन्दोलनप्रति एकदम सम्वेदनशील छ : उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार
Tuesday, 11.10.2015, 11:17am
पुरै सरकार मधेश आन्दोलनको बारेमा निकै गम्भीर देखिएको छ । पछिल्लो समय ओलीजीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले वार्ताको पहल गरेर वार्तालाई सकारात्मक मोडमा पुर्याएको छ । यही सरकारको पालामा प्रथम पटक वार्तामा आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समस्या समधान गर्न विषयले प्रवेश पाएको छ । दुई पक्षबीच जुन रुपमा वार्ता भएको थियो त्यो निकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको थियो तर बीचमा वीरगञ्ज घटना भएको कारणले अलि अविश्वासको वातावरण सृजना भएको छ ।
यसपटक महिला राष्ट्रपति पाउला अमेरिकाले ?
Tuesday, 09.01.2015, 11:38am
विश्वमा मानवअधिकार र समानताको वकालत गर्ने विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा जातीय र लैंगिक समानतामा भने निकै पछाडि देखिन्छ । त्यहाँको राजनीतिको उच्च पदमा अहिलेसम्म महिला पुग्न सकेका छैनन् । तर, यतिबेला अमेरिकाले महिला राष्ट्रपनि पाउला त भन्ने बहस सुरु भएको छ । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपतिको लागि सो निर्वाचन हुन लागेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एक जना महिला नेत्री पनि रहेकोले अहिलेको अमेरिकामा यो नयाँ विषयले चर्चा पाएको हो ।
Tuesday, 08.04.2015, 04:57pm
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा उर्जामन्त्री हुँदा गरेको कामबाट आम जनतामा लोकप्रिय बनेका एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टको राजनीतिक–सैद्धान्तिक धार त्यस्ता केही आंैलामा गन्न सकिने नेताहरुको हाराहारीमा छ । राजनीति देश र जनताका लागि गर्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार भएर निभाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बिष्टले मन्त्री हुँदा र मन्त्रीबाट हट्दा पालना गरेर थप चर्चामा आए । मन्त्रीबाट हटेकै दिन लुरुलरु हिंडेर ट्याक्सी चढेर डेरा पुगेका बिष्टको राजनीतिक उचाई कति चुलिएको रहेछ भन्ने दृष्टान्त एमालेको नवौं माहाधिवेशनमा उनले पाएको सबैभन्दा बढी मतबाट पनि पुष्टि हुन्छ । अहिले यस्तै इमान्दार नेताहरु मुलुकका राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि एक किसिमको अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले प्रकाशन गरेको बिष्टसंगको कुराकानी यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विपतलाई पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ
Wednesday, 05.27.2015, 11:38am
हामीले सुरक्षित र सम्भव भएका स्थानमा एकीकृत बस्तीको योजना ल्याउँछौँ । मापदण्ड सहितका घर बनाउँदा पनि हाम्रो मौलिकतामा नयाँ प्रविधि जोड्नेछौँ । सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनेको छ । यसबाट ग्रामीण भेगमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक सामान्य घर बनाउन सकिन्छ । यसो हँुदा गरिबलाई पनि राहत हुने भो । योसँगै अहिले भुइँचालोको प्रभावमा नपरेका तर भविष्यमा खतरा रहेका ग्रामीण खासगरी गरिब बस्तीका लागि पनि हामीले योजना ल्याउँछौँ । ग्रामीण भेगमा स्थानीय साम्रगी बाँस, गोबरको प्रयोगबाट घरलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । ग्रामीण बस्तीका घरलाई पनि नयाँ ढंगले संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
Tuesday, 04.07.2015, 01:23pm
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच वार्ता प्रक्रिया स्थगित भयो । वार्ताले निकास नदिएसंगै संविधानसभाको बैठक बोलाइएको छ । तर, संविधानसभा बैठक चल्दै जान्छ कि पुनः सहमतिका लागि भन्दै स्थगित हुन्छ ? यो आम चासोको विषय छ । सहमति नभए पनि संविधान बन्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसंगको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ ।
पार्टीभित्र संसदमा जस्तै बहुमतले अल्पमतलाई पेल्न खोज्यो
Tuesday, 03.31.2015, 10:56am
एमालेभित्र गुटगत राजनीति मौलाउन नवौं महाधिवेशन कारक बन्यो जो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । महाधिवेशनमा हामी निकै नराम्रोसँग गुटबन्दीमा विभाजन भयौं । जसले गर्दा विचारमा कम र सांगठनिक, त्यसमा पनि नेता को हुने भन्ने गुटबन्दीको राजनीतिमा निकै नराम्रोसँग फस्यौं । त्यसैको प्रभाव नियुक्ति, सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनमा पर्दै गइरहेको छ । अर्थात् महाधिवेशनको निरन्तरताको रुप वा असरको रुपमा यो विवाद रहिआएको छ ।
Tuesday, 03.17.2015, 12:32pm
Tuesday, 11.11.2014, 12:53pm
बाग्लुङगमा जन्मिएका डिल्लीराम सुबेदी, नेपाल विद्यार्थी संघमा क्रियाशील र विचारवान विद्यार्थी नेता हुन् । पोखराको पी एन क्याम्पस, राजधानीको काठमाडौं शिक्षा क्याम्पस र त्रिचन्द्रमा क्याम्पसबाट अंग्रेजी र समाजशास्त्रमा अध्ययन गरेका सुबेदी, शिक्षा क्याम्पसमा ०६० मा इकाई अध्यक्ष हुँदै २०६२ मा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए । गणतान्त्रिक आन्दोलन, शैक्षिक र सामाजिक अभियानमा विशेष भूमिका खेलेका सुबेदीसंग नेविसंघको ११ औं महाअधिबेशनमा पश्चिमाञ्चलबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षका आकांक्षी हुन् । महाअधिवेशनको सरगर्मी बढेका बेला सुबेदीसंग गरिएको कुराकानी ः–
Tuesday, 10.21.2014, 10:34am
नेपालीहरुको पौराणिक तथा साँस्कृतिक पर्व शुभदिपावली सुरु भएको छ । यस अवसरमा फ्लोरीकल्चर एशोसियसन नेपालको आयोजनामा काठमाडौ जावलाखेलमा ४ दिने पुष्पमेला चलिरहेको छ । मेलाकाबारेमा मेला संयोजक तथा एशोसियसन नेपालका उपाध्याक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठसंँग मेलासँग सम्बन्धि कुराकानी–
त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं
Tuesday, 09.23.2014, 05:54am
खोटाङमा जन्मेर लाहुरे बनेका ज्ञानराज राई १५ वर्षदेखि गोर्खा अन्दोलनका अभियान्ताका रुपमासक्रिय छन् । राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालिन उपध्याक्ष परशुराम राइर्कका सुपुत्र राईलाई नपुग्दो केही थिएन । तर उनले संघर्षको बाटो रोजे । फलतः गोर्खा आन्दोलनमा लाग्दा ललितपुरको घरसमेत गुमाए र अहिले बेलायतको लण्डनमा ड्राइभिङ गर्दै गोर्खा आन्दोलनमा सक्रिय छन् । उनकै अगुवाईमा भएको गोर्खा सत्यग्रहले बेलायती सरकारको मुटुमा ढ्याङग्रो ठोकेको छ । ९ नोभेम्बर १९४७ को नेपाल भारत र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको अक्षरशः कार्यन्वयन नभएसम्म आन्दोलन नटुंगिने बताउने राई राजनीतिक लबिङमा अहिले काठमाडौमा छन् ।
Tuesday, 09.09.2014, 05:31pm
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काख सोलुखुम्बु जिल्लाको गोली १ मा जन्मिएका विद्यार्थी नेता हुन शुभराम बस्नेत । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा एक इमान्दार र कर्मठ नेता शुभराम ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि विद्यार्थी राजनीतिमा हेलिएका हुन् । विद्यालय अध्ययनकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघको ईकाई समिति सभापतिबाट राजनीतिको कखरा शुरु गरेका बस्नेत २०५३ सालतिर नेपाल विद्यार्थी संघको काठमाडौ सोलु सम्पर्क समिमिको अध्यक्ष हुँदै २०६५ सालमा शंकरदेव क्याम्पस काठमाडौको स्ववियु सभापति तथा ८३ वटा स्ववियुहरुको परिषद अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोध गर्दा पटकपटक प्रहरीको हिरासतमा पुर्याइएको विद्यार्थी नेता बस्नेतले पहिलो पटक २८ दिन काठमाडौमा र २१ दिन भक्तपुरमा प्रहरीको खोरमा थुनिएका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघको नेताको हैसियतमा नेपालको ६५ जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका बस्नेतले नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा अगाडी सारेका छन् । यसै सन्दर्भमा बस्नेतसंग युगसम्वादले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप–
हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं - ज्ञानु गजमेर
Tuesday, 09.02.2014, 08:40pm
धनकुटाको बुधबारेमा ४२ वर्ष अगाडि जन्मेका ज्ञानु गजमेर पेशाले होटल व्यवसायी हुन । आफ्नो घरको दुःख टार्न वैदेशिक रोजगारमा पुगेपछि बल्ल थाहा भयो– आफूजस्तै मान्छैले यस्ता उद्योग चलाउँदा रहेछन भन्ने कुरा । विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको कमाई स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ होटल व्यवसाय शुरु गरेका हुन् गजमेरले । हिन्दुहरुको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरको सामुन्ने तिलगंगामा होटल पालज्ञा संचालन गरेका गजमेर अहिले एकता होटल तथा गेष्ट हाउस व्यवसायी संघका अध्यक्ष पनि हुन् । आगामी भदौ २१ गते संघको साधारणसभा हुन गैरहेकोले यसै सन्दर्भमा गजमेरसंग व्यवसाय संचालन तथा संघको भावी कार्यक्रमका बारेमा युगसम्बादका लागि गरिएको यो कुराकानी -
» बायोमेट्रिक प्रणाली संचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारी अरु भरपर्दो हुन्छ
» अहिले नेपाललाई बिजुली, १० वर्षपछि नेपालबाट बिजुली : मोदी
» संविधानमै बजेट ल्याउने तिथि निर्धारण गरिनुपर्छ
» बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा
» माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन्
» संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले के भने
» न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकराउको सन्देश गएको छ
» एमाओवादीमा विचार कि संगठन प्राथमिक भन्ने द्विविधा छ - मुमाराम खनाल
» स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव
» खेलकूद राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र विकासको आधार हो - खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल
» घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र वाध्यता पनि छैन- दिनानाथ शर्मा, प्रवक्ता एम�
» कसैको प्रेरणाले होइन मेहनेतले गीतकार भए - गायत्री थापा
» राष्ट्रियताको वैचारिक नेतृत्व हुन सकेन - मोदनाथ प्रश्रित
» मिश्रित प्रणाली निर्वाचनमा दोष बढी गुण कम देखियो - पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री नेपाली कांग�
» अहिलेको विवाद संविधानवादका निश्चित मापदण्ड आत्मसात गर्न नसकेर - हरिहर दाहाल
» यसपटक विगतमा जस्तो समस्या देखिन्न – युवराज ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले
» " कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो वर्चश्व देखाइदियो " : नारायणमान विजुक्छे
» अनेरास्ववियुले विरासत गुमाएको छैन- किशोरविक्रम
» राजनीति पनि मोडलिङ जस्तै
» यसरी खाइन्छ घूस